Mifananidzo yese yakaratidzwa pane ino saiti kana kushandiswa mu software uye ma ebook akawanikwa online pamasaiti ayo anotendera iwo mashandisirwo awo nekuda kwezvinangwa zvekutengesa. Kana paine kukanganisa, kana kana iwe uri muridzi wemufananidzo uye uchitenda kuti uri kushandiswa zvisizvo, tumira e-mail kune info @thatsluck.com, kuitira kuti tikwanise kuibvisa ipapo ipapo. Hazvisi kuenda ThatsLuck.com shandisa kana kuratidza chero copyright mifananidzo.
Kwayedza sosi yemifananidzo yakashandiswa
Mberi Kavha yemabhuku eBook: Las Vegas - Mufananidzo we Suyash Dixit da Pixabay
Vhidhiyo iri papeji rekutanga iri pasi peiyo Creative Commons rezinesi. Munyori info.
Logo & Zvitengesi Copyright
Zviratidzo zvese ndezvavo varidzi vepamutemo: echitatu bato rezviratidzo, marogo, mazita echigadzirwa, mazita ekutengesa, emakambani nemazita emakambani ataurwa, zviratidzo zvevaridzi vazvo kana zvitengesi zvakanyoreswa nemamwe makambani uye zvakangoshandiswa kutsanangudza chete, pasina chinangwa. kutyorwa kwekopiraiti kuri kushanda. Iko kuratidzwa kwezviratidzo zvataurwa pamusoro apa nemarogo zvinoshanda kuchinangwa chinongotsanangudza chezviri mukati, sekutongwa nemutemo uripo.